Malunga nathi-i-S-conning Technology Group Ltd.
I-S-conning Technology Group Ltd, yenye yezobuchwephesha bokuvelisa oomatshini, eyasekwa ngo-2010, ifektri igubungela ummandla wama-5200㎡, ozibophelele ngokukodwa kwisiphelo esiphakamileyo seMizi-mveliso esinezixhobo kunye nokuqonda koshishino.
Ngamandla e-R & D kunye nenkqubo esemgangathweni yeprimiyamu, i-S-conning Tech yokudibanisa uluhlu lokuthengisa lwehlabathi: Inkqubo yokuphawula kunye nomatshini wokupakisha kwizirinji ezilahlwayo, Isantya esiphezulu kunye neelebheli ezichanekileyo eziphezulu zeefektri zoMayeza, amashishini okutya kunye nesiselo, amashishini ezinto zokuthambisa kunye nemihla ngemihla .
I-S-Conning lilungu lombutho wezixhobo zamayeza e-China, i-China eyenziweyo yokubonelela nge-resin kunye nelungu lombutho we-thermoforming, ilungu lombutho weshishini lezimonyo lase-Guangzhou, kunye nelungu lokuzoba lilonke leemfuno zobuchwephesha zoomatshini bokulebhelisha. Siphumelele izatifikethi ezininzi, ezinje nge "shishini elitsha lobuchwephesha", "inzululwazi kunye netekhnoloji yokuyila amashishini amancinci amancinci", "amashishini enziwe ngabenzi be-patent ka-2016", "amashishini emigangatho yokuqinisekisa ukhuseleko" njalo njalo. Inkampani ipasile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO9001 kunye nesatifikethi se-CE.
I-S-conning Tech ibandakanyeka kuphando olungagungqiyo lokuzenzekelayo kwemizi-mveliso, ubuchwepheshe obuhlala buhleli kwaye kugxilwe kulwenziwo lwesiphelo esiphakamileyo, siyazingca ngomatshini wethu womgangatho weprimiyamu oqhuba ngaphezulu kwamazwe ayi-100 kwaye wonwabele igama elingaqhelekanga, ngokuchitha uluhlu olubanzi lwemveliso, I-S-conning ihlala izinikezele ekuzameni ukufumana iiprojekthi ezinenzuzo ngakumbi kubukho behlabathi kunye neenkampani zamanye amazwe.
Iimakethi zethu zentengiso
Sinamaqela ama-5 eentengiso zehlabathi…
Afrika, empuma mpuma
• UMntla noMzantsi Merika
• EAsia naseOceania
Yonke imibuzo yakho kunye namathandabuzo ziya kuthunyelwa kwiqela elifanelekileyo lokuthengisa ngokwelizwe lakho okanye ilizwe apho iprojekthi ikhoyo. Iqela ngalinye lokuthengisa lineGosa loLawulo, abaPhathi beeNtengiso kunye nabameli beNtengiso, bonke abanamava kakhulu kwaye banolwazi- hayi kwizisombululo zemveliso kuphela kodwa nakwiimarike zakho.
→ Umthengisi we-TOP 3 kwimakethi yase-China-apho sigqwesa ekubhaleni umgca womatshini, ukupakisha umatshini.
→ Ilungu lombutho wezixhobo zamayeza eChina.
→ Umthengisi we-OEM kwabanye oomatshini abaphambili kwishishini.
→ Ilungu lokuzoba ngokweemfuno zobugcisa ngokubanzi zoomatshini bokulebhelisha
→ Ilungu lombutho wezithambiso zecangzhou.
Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo,